1500 kaloria sakafo | Nutri Diet
Saika ny olona amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainantsika dia te-hihena, mifototra amin'ny fanatanjahan-tena na ny sakafo. Amin'ity tranga ity dia te-hanome sakafo ny Kaloria 1500 tsara ho anao hahatratraranao ny tanjonao.
Ny fifehezana ny lanja dia iray amin'ireo hetsika voalohany tsy maintsy ataontsika rehefa mahatsapa ho be loatra isika na somary matavy loatra, ny lakileny dia ny sakafo voalanjalanja sy feno. Raha liana ianao dia tohizo hatrany ny famakiana ireo andalana ireo.
Ny fihinana kaloria 1500 isan'andro dia fomba tsara hampihenana lanja nefa tsy misy famerana be loatra, noho izany dia mora ny mihatra amin'ny andro anio. Tsy tokony ho variana loatra amin'ny lanja mihitsy isikaTokony ho fantatsika fa ny lanjantsika dia miova isan'andro iray salan'isa roa kilao ambony, roa kilao midina.
1 Torohevitra hampihenana lanja
2 Sakafo 1500 kaloria
2.1 Sakafo atoro anao
3 Vola natolotra
5 Torohevitra hotanterahina
6 Menio 1.500 kaloria
6.3 sakafo hariva
Rehefa manolo-kevitra ny hampihena ny lanja isika dia mila mazava tsara ny tanjontsika, mahareta, tsy tapaka ary manaraka ny sakafo fidintsika. Ny lakilen'ny fahaverezan'ny lanja dia mihinana kaloria kely noho ny andaniantsika, noho izany dia mila mampihena ny fihinanana isika ary mampitombo ny fandaniana kaloria miorina amin'ny fampihetseham-batana.
Amin'izao fotoana izao, fa tsy mampihena ny lanjany mandritra ny telo volana hahazoana ny vatantsika nofinofis, dia mila mianatra manova fahazarana mihinana isika mba tsy hianjera amin'ny fahadisoana na fomba fanao ratsy. Voalohany indrindra, mba tsy hampidi-doza ny fahasalamanao, kajio ny index index ny vatanao hahitanao hoe inona ny refy anananao.
Amin'ny lafiny iray, manontania tena hoe firy andro ianao manao fanatanjahan-tena isan-kerinandro, ohatrinona ny sakafo nendasina, ny gliosida na ny sakafo tsy mahasalama laninao ao anatin'ny herinandro.
Sakafo 1500 kaloria
Amin'ny sakafo dia tsy tokony "hijaly" ianao fa tsy maintsy mifehy tena fa tsy mila mijaly mandritra ny fotoana rehetra anaovantsika izany. Mila mihinana amin'ny vondrona sakafo rehetra isika nefa tsy mamela na inona na inona, tsy mila manimba ny fahasalamantsika amin'ny fisorohana ny fihinanana tavy na gliosida.
Makà iray sakafo voalanjalanja izay misy ny vondron-tsakafo rehetra, ny habetsany sahaza azy ary tsy mihoatra ny iray amin'izy ireo.
Sakafo atoro anao
Voankazo sy legioma. Izy ireo no tokony ho sakafo fatrahanina indrindra amin'ny sakafonao. Makà servisy 5 isan'andro, ohatra, lovia legioma voahandro, natsatsika na nandrahoina, lovia tsara. Ho fanampin'izany, ampahafantaro ny legioma toy ny salady vaovao sy ny voankazo misy vanim-potoana sy ny kalitao misy hery sy vitamina.
Ampahafantaro ny gliosida farafaharatsiny indray mandeha isan'andro, toy ny vary, paty varimbazaha, ovy, na mofo. Ny tsara indrindra dia raiso 30 grama misy gliosida tsotra tadiavinao.
Tsy mila izany isika adinoy ny misotro rano tsy misy tsiranoka mandritra ny andro, mandritra ny sakafo sy ny andro sisa.
Hena tsy misy tavy 200 grama. Ny tsara indrindra dia ny mihinana bitro, akoho amam-borona, henan'omby,
Trondro fotsy na atody 200 grama.
Vary volontany 60 na paty varimbazaha manontolo.
Ovy 300 grama.
Legioma 70 grama.
Legioma 400 grama isan-karazany.
Voankazo vaovao 400 grama.
Vera voajanahary vera.
Manaraka izany dia lazainay aminao hoe inona avy ireo sakafo tsy tokony hialantsika, mba hamerenantsika ilay tarehimarika ary tsy hianjady amin'ny fahazaran-dratsy mihinana.
Sakafo matavy be toy ny saosisy henan-kisoa, zanak'ondry na henan-kisoa, hena, margarine, fromazy matavy na sitrana.
Sakafo efa masaka. Na dia mahazo aina be aza izy ireo satria mila hafanaina fotsiny, dia feno tavy sy siramamy ary sira be loatra. Raha manapa-kevitra ny hanana lovia voaomana isika, dia jereo ny mari-piraketany mba ho salama araka izay azo atao.
Aza manararaotra saosy voaomana na namboarina namboarina. Aza mihinana saosy miorina amin'ny menaka na menaka na menaka manitra. Ialao ihany koa ireo vinaigrettes rehetra amidy ho maivana na maivana satria tsy salama koa izy ireo. Ny tena tsara dia ny manandrana sy mampiasa voasarimakirana vaovao hitafy ny loviao.
Pastry indostrialyIzy ireo dia sakafo feno siramamy, tavy mahavoky, tavy transgenika, sira, preservatives ary zavatra maro izay tsy dia ilaina loatra amin'ny vatana salama. Aza mihinana cookies, mofomamy, na mofomamy vitaina mialoha, noho izany.
Zava-pisotro malefaka miaraka amina siramamy. Ny vera mahazatra an'ny soda tianao dia mety hanimba ny sakafonao, ary aza misotro soda feno siramamy izay tsy mahasoa mihitsy.
Aza misotro toaka. Mampatavy anay izy ireo noho ny kaloria tsy misy.
Aza miala amin'ny sakafo maraina. Io no sakafo manan-danja indrindra amin'ny andro ary hanome anao tanjaka izany ary tsy hahatsapa ho toy ny tsakitsaky anelanelan'ny sakafo ianao.
Mitadiava fifandanjana amin'ny sakafo. Aza mihinana be dia be ary mihinana kely. Tokony hanome fahafaham-po ny tenanao isaky ny misakafo ianao fa amin'ny sakafo mahasalama.
Mihinana sakafo lehibe 3, sakafo atoandro ary sakafo kely.
Mihinana ronono vita amin'ny ronono rehetra.
Makà voankazo isan'andro, mifidiana foana ny vanim-potoana sy ny natiora.
Voamaina manontolo ary ny tsara indrindra ho an'ny sakafo maraina.
Fehezo ny isan'ireo menaka alainao isan'andro, Tsy tokony hihoatra ny sotro fihinana telo isan'andro ianao rehefa misakafo.
fitaovana fijinjana sakafo manankarena gliosida amin'ny legioma y proteinina.
ny fiaraha-misakafo tsy maintsy maivana izy ireo ary amin'ny ora maraina.
Ampidiro hatrany legioma amin'ny sakafo hariva.
Mihinana milamina amin'ny toerana milamina tsy misy fihenjanana na fihazakazahana. Tokony handany ny fotoananao ianao, hanararaotra ny fotoana ary hankafizanao ny sakafo.
Ny fihinanana sakafo dia tsy midika ho maritiora, tokony hankafizinao sy sarobidy aminao izay nohaninao. Mila mifehy fotsiny ny habetsany sy ny fomba nahandroana azy ireo ianao.
Aza adino ny manao fanatanjahan-tena. Tena ilaina ny mitazona ny vatana hiasa. Farafahakeliny intelo isan-kerinandro.
Menio 1.500 kaloria
Kopy misy ronono nesorina, ronono omby na ronono legioma. Miaraka amin'ny kafe na dite.
Mofo kely 2 an'ny mofo varimbazaha manontolo.
Ampahany ny fromazy vaovao skimmed sy
Legioma nandrahoina na natsatsika mitafy menaka oliva iray sotro.
Legioma 30 grama.
Trondro fotsy voaendy na akoho amono ampahefatra.
Salady legioma sy legioma maintso, miaraka amin'ny kapoaky ny tuna voajanahary, trondro roa ary fromazy matavy ambany.
Mofo 2 na ampio legume 25 grama.
Raha mitady hihena ianao amin'ny fomba azo antoka sy mahasalama, dia aza misalasala manatona endocrinologist hitarika anao amin'ny fizotran'ny fihenan-danja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » 1500 kaloria sakafo